Vanopfuura hafu yevanyoreri veApple Music vanoshandisa spatial audio | Nhau dze iPhone
Mimhanzi chikamu chehupenyu hwedu uye Apple inoziva kuti inzvimbo yakanaka yekudyara, kugadzira uye kugadzira. Kutanga iwe pachako mimhanzi yekushambadzira sevhisi Kwaingova kutanga kwekuwana nyika yemimhanzi. Ipapo kwakauya iyo AirPods mumhando dzayo dzese uye nguva pfupi yakatevera kwakauya spatial odhiyo yekubatanidza uye isina kurasikirwa odhiyo iyo Apple yakabatanidzwa mumasevhisi ayo ese. Silver Schusser, mutevedzeri wemutungamiri weApple Music uye Beats, akavimbisa mubvunzurudzo kuti inopfuura hafu yeApple Music vateereri uye vanyoreri vanoshandisa iyo spatial odhiyo chimiro.
Hafu yevateereri veApple Music vanoshandisa spatial audio
Spatial audio tekinoroji ye kutenderera kurira iyo inobvumira mushandisi kunzwa anonyudza zviitiko zvemukati memultimedia. Kwete chete mafirimu uye akatevedzana asi mimhanzi inogonawo kunzwika neiyi spatial audio chero yakarekodhwa kana kuchinjirwa kune iyi fomati. Spatial odhiyo yakarova iyo Apple Music catalog muna Chikumi 2021 uye kubvira ipapo nziyo dzinopfuura mamirioni makumi manomwe dzinotsigirwa nechikamu.
En hurukuro mutevedzeri wemutungamiri weApple Music and Beats, Silver Schusser, akavimbisa izvozvo inopfuura hafu yevanyoreri veApple Music shandisa spatial audio:
Isu ikozvino tine inopfuura hafu yepasi rese Apple Music munyoreri base yekuteerera pane spatial odhiyo, uye iyo nhamba iri kukura zvakanyanya, nekukurumidza. Tinoshuva kuti nhamba dzacho dzakakwirira, asi dziri kupfuura zvatinotarisira.
Zvakafanana hazviitike nazvo Kusarasikirwa kana kurasikirwa audio. Ichi chimwe chinhu chinowanikwa muApple Music. Inoumbwa ne kusarasikirwa nekutsikirira odhiyo kana Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Kodheki yekuwana nayo zvigadziriso kubva pa16-bit/44,1 kHz (CD quality) kusvika pa24-bit/192 kHz.
Dambudziko reLoseless nderekuti haitsigire kubatana kweBluetooth. Kureva kuti, iyo yakanyanya kudzvanywa uye yakanyanya ruzha mhando haigone kuwanikwa neAirPods kana Beats uye zvinodikanwa. kubatanidza newaya kumahedhifoni, zvinogamuchira, zvitauri, kana mataurirwo akavakirwa-mukati emudziyo. Ndicho chikonzero chiyero chekushandiswa kweLosseLess hachina kunyanya kukwirira, kunyanya nekuda kwekuwedzera kwekushandiswa kweBluetooth speaker, kusanganisira AirPods, munharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vanopfuura hafu yevanyoreri veApple Music vanoshandisa spatial odhiyo
Maitiro ekubvisa ruzha kubva pavhidhiyo pa iPhone
Iwe unogona ikozvino kuona director Park Chan-wook's short film yakapfurwa pa iPhone 13 Pro